သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ဥယျာဉ်တော်ထဲက သရက်သီး ငတက်ပြား ..အပိုင်း (၂) (K-မမ ရေးသည်)
ဥယျာဉ်တော်ထဲက သရက်သီး ငတက်ပြား ..အပိုင်း (၂) (K-မမ ရေးသည်)
တွဲလဲရယ် နေပါဦး.. (ပုံလေးကို ဒီကယူပါသည်)
“ဟိတ်ကောင် .... မင်းထမီကို ခါးတောင်းကျိုက်လိုက်....ဒီထိုင်ခုံကို ငါ နံရံမှီထားပေးမယ်။ ထိုင်ခုံဘောင်ကနေ နောက်မှီတန်းပေါ်ကိုလှမ်း။ လက်နှစ်ဖက်က အဲဒီ သံဇကာကိုဆွဲ။ ဟိတ်ကောင် ..... မှန်စောင်းနဲ့ လွတ်တဲ့နေရာကို ပြောတာ။ မင်းလက်တော့ မှန်ရှတော့မှာပဲ။ အေး.... ဟုတ်ပြီ အဲဒီလို ခဏခိုထား။ ငါဒီပြတင်းပေါက်ကို မြဲမြဲကိုင်ထားမယ်။ ညာခြေထောက်က ပြတင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်ကို လှမ်းနင်း။ နင်း .....ရဲရဲသာနင်း။ ပြုတ်ကျရုံအပြင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဘယ်ခြေထောက်က တလှမ်းတက်။
အေး .... ညာခြေထောက်က ခေါင်းမိုးပေါ်ချ။ ညာလက်က ခေါင်ချုပ်သစ်ကိုဆွဲ။ ဘယ်ခြေကိုပါ တခါတည်း ခေါင်းမိုးပေါ်ချ။ အေး.... ဟုတ်ပြီ။ ရော့ .....ဝါးလုံး။ ဟိတ်ဟိတ်..... အဲဒီအလယ်လောက်မှာပဲနေ။ ဆက်မဆင်းနဲ့။ တော်ကြာ ခေါင်းမိုးပေါ်က ပြုတ်ကျနေလို့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတွေ ဖြစ်နေအုံးမယ်။ ဟူး …… နင့်ကိုပြောရတာ မောလိုက်တာ။”
ဒုန်း.. ဒုန်း.. ဒ ရော … ဘုတ်။
(ဒုန်း =သရက်သီး ခေါင်မိုးပေါ်သို့ ပထမကျသံ၊ ဒုန်း= နောက်တဆင့်ခုန်သံ၊ ဒ ရော= သရက်သီး သွပ်ပြားပေါ်လိမ့်သံ။ ဘုတ်= သရက်သီးမြေကြီးပေါ်ကျသံ)
“ဟာ .... ဟိတ်ကောင် .... ခေါင်းမိုးနဲ့ လွတ်အောင် ရိုက်ဟ။ အဖွားကြားတေ့ာမှာပဲ။”
“ရဘူးဟ။ ခေါင်းမိုးနဲ့ လွတ်တဲ့ အသီးက ဝါးလုံးမမှီဘူး။”
“ဘယ်တတ်နိူင်မလဲလေ။ ဟိတ်ကောင်..... မြန်မြန်..... ဆယ်နှစ်နာရီ ထိုးတော့မယ်။ တော်နေကြာ မမဝေ ထမင်းစားပြန်လာရင် လာတော့မှာ”
ဒုန်း.. ဒုန်း.. ဒ ရော … ဘုတ်...
“ဘယ်နှစ်လုံးရပြီလဲ။ အပင်မှာ အများကြီးရှိသေးတယ်။”
“ဟိတ်ကောင် .... လောဘမကြီးနဲ့ သရက်သီးဆိုတဲ့ အမျိုးဟာ တခုခုနဲ့ထိမိရင် အမြန်စားမှ ..... ဒါမှမဟုတ် မမှည့်ပဲ ပုပ်သွားရော။ ဗဟုသုတက ငါ့ခြေဖျားတောင် မမှီဘူး။” (ထည့်ဟ ဒီလို အခွင့်ရေးဆိုတာ ရခဲပါဘိ။)
ဒုန်း.. ဒုန်း.. ဒ ရော … ဘုတ်
“ဟိတ်ကောင် ဆင်းတော့။ ဆင်းတော့ပါဟ။ ဟာ....မင်း … မင်းထမီ ခါးတောင်းကျိုက် ပြုတ်သွားပြီလား။ ပြန်ကျိုက်လိုက်ဦး။” (အခုခေတ်လို အင်္ကျီနဲ့ဆင်တူ ဘောင်းဘီလက်စကတွေ ရှိခဲ့ရင်တော့ ဒီလိုပြဿနာပေါ်မှာ မဟုတ်ပါ။)
“မမ လုပ်အုံးဟ။ ငါ့ထမီက တိုသွားလားမသိဘူး .... နောက်ကိုညှပ်လို့မရတော့ဘူး။”
“အရာထဲ အရေးပေါ်ပြန်ပြီ။ ညှပ်လို့မရလဲ ထမီ မြဲမြဲပြန်ဝတ်။ ဒီတိုင်းဆင်းတော့။ ဘယ်နှယ့်... ဆင်းဖို့မနည်း ပြောနေရတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ မမဝေ ပြန်လာခါ နီးနေပါပြီဆိုမှ။”
“ဘယ်လို ပြန်ဆင်းရမလဲ။ ငါမဆင်းတတ်တော့ဘူး။”
“ဟင်....တက်တုန်းကတော့ ရှောရှော ရှူရှူ။ အဆင်းကျတော့ ခါးတောင်း မကျိုက်တတ်တာနဲ့... ဘာနဲ့။ အတက်တုန်းက အဆင့်တွေ မှတ်မိလား။ အဲဒီအဆင့်တွေကို ပြောင်းပြန်လှန်မှတ်။ ဒါပဲဟာ။ လွယ်လွယ်လေးကို ခက်အောင် လုပ်နေတယ်။ ငါပြတင်းပေါက်ကို ကိုင်ထားပေးမယ်။ မင်း အမိုးခေါင်ကို ကိုင်.... ပြတင်းပေါက်ဘောင်ကို လှမ်းနင်း ”
“ဟိတ်ကောင် .... မမ အပေါ်မော့မကြည့်နဲ့နော်”
“အော် …. အပေါ် မော့ကြည့်မိလို့ မတော်မရာ မြင်ရင်လဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေပါ့မယ်။ မီးမီးက ပ်ိုတောင် ကြောက်တတ်သေး။”
“ - - -။” (ကောင်းချီးပေးခြင်း)
“ဟိတ်ကောင် ... ဘယ်ခြေက သံဇကာကို လှမ်းကူးလေ။ တန်းလန်းကြီး မလုပ်ထားနဲ့ဟ။ ဒီမှာ ငါကိုင်ထားတာ ညောင်းလာပြီ။ ”
“မမှီဘူးဟ ထမီက တုတ်နေတာ။”
“နင့်ကြောင့် ငါတို့အသံ လူကြားတယ်။ မမဝေ တွေ့သွားရင်တော့ ငါမပါဘူးလို့ပြောမှာ။ တစ်လက်မလောက် ပိုလှမ်းလိုက်လေဟာ။”
“အေးပါဟ.... နင်ကလဲ အရမ်းဆရာကြီးလုပ်တာပဲ။”
“ဆရာကြီးဆိုပေမယ့်လဲ အောက်က နေရတာပါ။”
နောက်ဆုံးတော့ သရက်သီး ငတက်ပြားဟာ မဟာပထဝီမြေကြီးပေါ် အောင်မြင်စွာ ဆင်းသက် နှိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ရာဇဝင်ထဲက ငတက်ပြားကတော့ မြေလျှိုးမိုးပျံနိူင်ပေမယ့် သဇင် ငတက်ပြား များထဲက သရက်သီး ငတက်ပြားကတော့ မိုးမရောက်မြေမကျ ငါးမိနှစ်ကျော်ခန့် TV ခန်းကပြတင်းပေါက်မှာ ဈာန်ဝင်စား ခဲ့ပါတယ်။ အတက်ထက် အဆင်းဟာ ပိုခက်တာ ကြားခဲ့ဘူးပေမယ့် လက်တွေ့ မဟုတ်တော့ မခံစားခဲ့ရဘူး။ အခုမှ တကယ်။
ပုတ်ချထားတဲ့ သရက်သီး ၁၀-လုံးကျော်ကျော်ကို နှစ်ယောက်ခွဲ သယ်ပြီး အဆောင်နောက်က ပတ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ရေညှိတွေကို သတိထားရှောင်ရင်းနဲ့ပေါ့။ (အော် ထပ်ကြွားရအုံးမယ်။ မီးမီးတို့ ဥယျာဉ်တော်မှာ ရေညှိကော မြက်ရိုင်းပင်တွေကောရှိသေးတယ်။)
ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ညကျတော့ မနိူင် ဈာန်ရခဲ့တဲ့ အကြောင်းပြန်ပြော ရယ်မောရင်း ... အဲဒီ နှစ်ရက်က စားခဲ့တဲ့ သရက်သီး ဝင်းရောင်တွေလောက် ဘဝမှာ ချိုမြိန်တဲ့ သရက်သီး မရှိခဲ့ပါဘူး။ နင်တို့ နှစ်ယောက်ပြောတာတွေနဲ့ သရက်သီးကြွေကျသံတွေက အဖွား နားလေးနေဦးတော့ မကြားပဲမနေဘူး လို့ တယောက်က ဝင်ပြောတော့မှ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲလေ လို့ပြောမိလို့ “ငပေါ” ဆိုပြီး ချီးမြောက်တာခံလိုက်ရသေးတယ်။ ဘယ်ရမလဲ “ရှားပါးခြင်း” ထက် “ပေါ” ခြင်းက ပြိုမတ်၏ လို့ အထွတ်တက်လိုက်တာပေါ့။
မြစ်ကြီးနားသူ ကေသွယ် က ငါအဖြေရကျပ်မယ့် မေးခွန်းကို မေးခဲ့သေးတာ။ “ဟိတ်ကောင် .... မမ နင် တကယ်ပဲ အပေါ် မော့မကြည့်ခဲ့ဘူးလား” တဲ့လေ။ ။
(ပြန်ပြောင်း တွေးလိုက်တိုင်း ရယ်ပြုံးစေအောင် အဖြစ်အပျက်လေးကို ဖန်းတီးပေးတဲ့ စတုတ္ထနှစ်မှလွဲ၍ ကျန်နှစ်တွေမှာ အခန်းဖော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေဦးသူ ချစ်သူငယ်ချင်း မနိူင် သို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။)
ဤပို.စ်တွင် သုံးခဲ.သော ဓာတ်ပုံလင့်ခ်များ...
(ကာယကံရှင် မနိုင်စိတ်ဆိုးပါက.. သည်ကိစ္စ အရပ်ရပ်သည် ကေ-မမ နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်..ပုံ. tg)
Posted by tg.nwai at 8:10:00 AM
ဟင့် အဲဒီဂလိုတော့ လုပ်နဲ့လေ။
ဖိတ်ခေါ်သူ ဒေါ်သိင်္ဂီ ၊ မှတ်တမ်းတင်သူ tg ၊ ရေးသားသူ ဒေါ်မမ ကြံရာပါ ဒီနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နင်နဲ့ငါ ၇၀/၃၀ လေ။
တယ်ကဲခဲ့ကြပါလား။ အခုတော့ အိန်ဒရေကြီးတွေနဲ့နော်။
မမစာရေးကောင်းတာကြောင့် သရက်သီးတွေကို မြင်ယောင်လွမ်းဆွတ်လာလို့ ဒီနေ့ပဲ တစ်လုံး ၂ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်။ သုပ်စားရမလား။ ငန်ပြာရည်နဲ့တို့စားရမလား စဉ်းစားလိုက်အုံးမယ်။
နေပါဦး မမရဲ့။ ငါတို့က သဇင်မှာ သုံးတန်းနဲ့ လေးတန်းမှာ single ခန်းတွေ ရတာပါ..နင်တို့က ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း..။
ပျော်စရာကြီးဗျ... မိန်းကလေးတွေ ဆိုပေမယ့် တကယ်လုပ်ကြတာပဲ ကိုး
နောက်ထပ် အဲသလို တွေ ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်ဗျို့....
သဇင်ဆောင်ရဲ့ အခန်းချထားရေး ပေါ်လစီအရ ဒီနှစ် ရှေ့ဘက်အခြမ်းဆို နောက်နှစ် နောက်ဘက်ခြမ်း လေ။ သို့ပေသိ သောင်းကျန်းသူဘွဲ့ ရထားတော့ ၁ တန်းမှာ ၃၃ နောက်ဘက်ခြမ်း ၊ ၂ တန်းမှာ ၉၅ နောက်ဘက်ခြမ်း ၊ ၃ တန်းမှာ အခန်းကျယ် ၃ နောက်ဘက်ခြမ်း ၊ ငါ အဆောင်မှူး ကို သွားပြောသေးတယ် မမ ၃နှစ်ဆက်တိုက်ဆိုတော့ မလွန်လွန်းဘူးလားလို့ သူက ပြောတယ် “နင်လိုသောင်းကျန်းသူကို front roll ထားရင် ငါအဆောင်မှောက်သွားမှာပေါ့တဲ့။ အဟီး အဲဒီလို ကြောက်တာ ငါကို။
သ.ါချင်းတွေကိုသတိရလိုက်တာ မြတ်နိုးက အဆောင်မနေဘူးဘူး။ဒါပေမဲ့ သွားခိုးအိပ်နေကျ
ခိုးအိပ်တဲ့ညတွေဆို သဇင်ရှေ့မှာ ကောင်လေးသယ်ချင်းတွေလာပီး သီချင်းဆိူပေးတယ်.
လက်ဖက်သုတ်တွေ ဇလုံနဲ့တလုံး တူ၂သုတ်စားကြ ပေါက်ကရတွေပြောကြနဲ့ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
အဆောင်ဒင်နာည ကိုလည်း သတိရတယ်..။
အဆောင်က ဟောကျူတာမမတွေကိုလည်း မျက်နှာချိုသွေး ပီးရင်ခိုးအိပ်
ပျော်ခဲ့ရတဲ့ညတွေပေါ့.. အဆောင်သူအစစ်တွေက ပိုပျော်မှာပေါ့
မနိုင်ကို ကြောင်တစ်ကောင်လို ပေါ့ပါးအောင် လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သည့် ကျားခင်မမ ကို လေးစားပါတယ်